'Wen Token?'- Polymarket ၏ Airdrop Futures Market အသစ်တွင် အဖြေများရှိသည်။ - Token Myanmar
Crypto crystal ball Polymarket သည် စျေးကွက်အသစ်ကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ Airdrop Futures.
အဆိုပါအင်္ဂါရပ်သည် စျေးကစားသူများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်နှင့် binary ရလဒ်တွင် အလောင်းအစားများထည့်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့နှစ်သက်သော ပရောဂျက်တစ်ခု၏ တိုကင်ကို လေထိုးလေလွင့်ခြင်းမှ လိုက်နာနိုင်သည်- ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊
Airdrops များသည် အစောပိုင်းအသုံးပြုသူများကို ဆုချရန်နှင့် အနာဂတ် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံကို စနစ်ထည့်သွင်းရန် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် ပရောဂျက်တစ်ခု၏ တိုကင်ကို အလွန်အမင်းရှာဖွေပြီးနောက် ထုတ်ဝေမှုများဖြစ်သည်။ cryptocurrency အသိုင်းအဝိုင်းရှိ အခြားသူများက အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို "အခမဲ့ပိုက်ဆံ" အဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။
"'Wen token?' သည် crypto တွင်အမေးအများဆုံးမေးခွန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်" ဟု Polymarket တည်ထောင်သူ Shayne Coplan က CoinDesk သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ “Airdrop Futures ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အချက်က အချိုးမညီတဲ့ အချက်အလက်တွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တာပါပဲ။ အမှန်တကယ်လွတ်လပ်သောစျေးကွက်တစ်ခုအရ ဖြစ်နိုင်ခြေများကို သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒါဟာ တကယ်ကို အစွမ်းထက်တဲ့ အကြံဥာဏ်ပါ။”
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က Polymarket tweet အရ Airdrop Futures သည် တိုကင်မထုတ်ပြန်ရသေးသော ထင်ရှားသော crypto ပရောဂျက် ၁၉ ခုအတွက် ခန့်မှန်းစျေးကွက်များကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းတို့တွင် Non-fungible တိုကင် (NFT) စျေးကွက် OpenSea၊ NFT စုဆောင်းမှု Bored Ape Yacht Club (BAYC) နှင့် ပိုက်ဆံအိတ်အက်ပ်လီကေးရှင်း MetaMask နှင့် Rainbow တို့ ပါဝင်သည်။
🚨 Airdrop Futures သည် ယခုအခါ Polymarket တွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်သည်။
"wen airdrop" ကို ဘယ်တော့မှ ထပ်မမေးပါနဲ့။
အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ပြီး တိုကင်ကို လေလွင့်နေသည့် သင့်စိတ်ကြိုက်ပရောဂျက်၏ မသာမယာများကို လိုက်နာပါ- https://t.co/PXoPH0VTTA
— Polymarket (@PolymarketHQ) ဇန်နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၂၂
သောကြာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Polymarket ဒေတာသည် မတ် ၃၁ ရက်မတိုင်မီ တိုကင်တစ်ခုကို 0.32 ဒေါ်လာနှင့် OpenSea တွင် 0.22 ဒေါ်လာဖြင့် တိုကင်ချခြင်း၏ ပေါက်ကြားမှုကို ပေးခဲ့သည်။ အကယ်၍ ပရောဂျက်သည် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီ တိုကင်တစ်ခုကို လေလွင့်ပါက၊ "yes" ရလဒ်ကို ဝယ်ယူသူများသည် $1 နှင့် အပြန်အလှန်အားဖြင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဤအတောအတွင်း၊ NFT ပရောဂျက် Bored Ape Yacht Club သည် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချိန်မတိုင်မီတွင် တိုကင်တစ်ခုကို ထုတ်လွှတ်မည်ဖြစ်ပြီး BAYC ၏မသာမယာများကို $0.67 ဖြင့် သဘောထား၍ ဈေးကစားသူများသည် စိတ်အားထက်သန်နေကြသည်။
Airdrop Futures ၏အလားအလာရှိသောအသုံးချပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှာအသုံးပြုသူများသည်အချိန်နှင့်ရင်းမြစ်များစွာကိုအသုံးပြုထားသောပရောဂျက်တစ်ခုမှ airdrop မရရှိခြင်းအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် airdrop စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုငြိမ်သက်အောင်ကူညီပေးနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့အသုံးပြုသည့်ပရောဂျက်များအတွက် "no" ရွေးချယ်မှုကို ဝယ်ယူနိုင်သော်လည်း airdrop ဖြစ်သွားပါက – win-win ရလဒ်အဖြစ် တိုကင်များကို လက်ခံရရှိဆဲဖြစ်သည်။
အခမဲ့ပိုက်ဆံနှင့်အတူလမ်းညွှန် @PolymarketHQ Airdrop အနာဂတ်-
1. airdrop အနာဂတ်များကို ရှာဖွေပါ။
2. ဝယ်ပါ &#039;No&#039; မည်သည့်ပရောဂျက်အတွက်မဆို သင်အသုံးပြုပါ။
3. အကယ်၍ airdrop ဖြစ်သွားပါက၊ သင်သည် အခမဲ့ တိုကင်များ ရရှိသည်၊ အကယ်၍ ၎င်းသည် သင့် airdrop အနာဂတ် ကုန်သွယ်မှုတွင် $$ ရနိုင်သည် https://t.co/pYG1U98du8
— Hart Lambur (@hal2001) ဇန်နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၂၂
Polymarket ၏ Airdrop Futures ကို Polygon တွင်အသုံးပြုထားပြီး အလောင်းအစားများကိုဖြေရှင်းရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော oracle ပရိုတိုကော UMA ကိုအသုံးပြုသည်။
အစောပိုင်း 24 နာရီနီးပါးကစတင်ပြီးကတည်းကစျေးကွက်၏ပမာဏစုစုပေါင်း $ 75,000 ကျော်သာရှိသည်။
Polymarket ရှိတယ်။ US ထိန်းကျောင်းသူများ၏ ဆံကေသာထဲသို့ ဝင်လာသည်။ မကြာသေးမီလများအတွင်း Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် ဆိုက်နှင့်အတူ ဖြေရှင်းခဲ့ပြီး ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁.၄ သန်း ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ CFTC သည် US တွင်လည်ပတ်မှုများကိုပိတ်ပစ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
Polymarket မှာ တင်ထားသလိုပါပဲ။ tweet တစ်ခု airdrop စျေးကွက်အကြောင်း၊ "အမေရိကန်တွင် ကုန်သွယ်မှု မရရှိနိုင်ပါ။"